Ngeempelaveki kwiifoto ezili-13-iGeofumadas
Iveki kwiifoto ze-13
NgoSeptemba, 2011 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Uhambo
Akukho nto injengokuphumla okwethutyana kunye neegeofumaditos phaya. Emva kwenyanga silwa nesitovu segesi semethane, emva kweemviwo saya kubhiyozela utyelelo lukatatomncinci owileyo waseHouston. Isishwankathelo ndikushiyela ezinye iifoto.
Emva koko yam yokugqibela ingxelo, baphumelele indawo yokuqala kwinqanaba lamacandelo amahlanu eKhosi yokuQala, emva koko baphumelela indawo yesithathu kwinqanaba lesikolo siphela, nakwindawo yokuhlangana kwindawo yokuqala kudidi lweChemistry. Aba bantu bazalelwe ukuba ziintshatsheli.
Kwihotele edlulayo sifumana ilifu leengcongconi ngokwaneleyo ukutyisa inkomo. Ukunikwa kwento eyaliwa yindodakazi yam, esele iluma okokuqala ebunzini, ndikhunjulwe ngesicelo se-iPad (M Mosqu) ephuma kwi-ultrasound ingxolo yendoda yamathambo ... ngokwaneleyo, silala ngovuyo ngokubuxoki obubonakala ngathi xa ndithetha ngawo.
Abanye benza umthambo, ukufudumeza iinjini. Umama wam enempilo enomdla phantse kwiminyaka engama-70 ubudala.
Le yembono ye-Yojoa Ichibi, ukusuka e-El Aguaje, indawo apho iminyaka engaphezu kweyesibini edlulileyo ngoncedo lwe-Google Earth kunye nento ethi oluna montuno safumana inkwenkwe sele sele ifikelela kwi-15 iminyaka.
Le paki eseLas Vegas, ecaleni kwenqwelo yezimbiwa efuzisela into yelifa labo. Apha sithenga ihempe yeBarça ngexabiso elihle, embindini wesitrato.
Iintaka ezinomsindo zi-obsessive ngokwenene, i-iPad inyamezele zonke iintlobo zobumdaka. Emva koko saya kwi-meteorite crater, ethi kwezi ntsuku ibe yindawo etofotofo kunye neentsimi zombona eziphindwe kabini emva kwempumlo ka-Agasti. Ngamnye uzise ilitye lesikhumbuzo.
Eminye ayithathi inkcazo ezininzi. Ngaphantsi kwempumlo yam etshisiweyo, kuba xa intombazana evathisa amehlo am ingahambi, silibale phantse yonke into, kubandakanya nebronzer.
Ngoku usebenze nzima ngelixa iindawo zokuthanda izwe zifika ...
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-GIS Kit, ekugqibeleni into enhle ye-iPad
Post Next Umqulu we-MobileMapper kwaye ukhuthaze ngesiSpanishOkulandelayo »